Faka iGoogle Earth ku-Ubuntu 18.04 kanye nokuphuma | Kusuka kuLinux
Google Earth wuhlelo olusinikeza ngembulunga ebonakalayo okukuvumela ukuthi uye kunoma iyiphi indawo ehleli etafuleni lakho ubuka imidwebo eminingi, kususelwa ezithombeni ze-satellite, izithombe ezisemoyeni, imininingwane yezwe evela kumamodeli wedatha we-GIS avela emhlabeni wonke namamodeli enziwe ngamakhompyutha.
Ungahlola noma yikuphi emhlabeni ngisho naku-3D futhi nangaphaya komhlaba. Ungahlola ubuso beNyanga neMars, futhi uhlole izinkanyezi esibhakabhakeni sasebusuku.
Lolu hlelo lwakhiwe ngaphansi kwegama elithi EarthViewer 3D yinkampani iKeyhole Inc, exhaswa yiCentral Intelligence Agency. Le nkampani yathengwa i-Google ngo-2004 yamunca isicelo.
Uhlelo itholakala kumalayisense ahlukahlukene, kepha uhlobo lwamahhala luthandwa kakhulu, iyatholakala kumadivayisi eselula, amaphilisi kanye namakhompyutha wakho.
2 Ungayifaka kanjani iGoogle Earth ku-Ubuntu 18.04?
Phakathi kwezici eziyinhloko zalolu hlelo, singagqamisa ukuthi selivele linamamephu e-3D esewonke. Futhi, ngaphakathi kwethebhu ye- "Voyager" kuGoogle Earth, ungavakashela amasayithi ahlukene amenyezelwe ngamafa omhlaba esintu yi-UNESCO.
Esinye isici sale nguqulo entsha yeGoogle Earth sithi umsebenzi othi 'Ngizoba nenhlanhla', lapho ngokuchofoza okukodwa nje, ipulatifomu izothutha umsebenzisi ayise endaweni engahleliwe ngenhloso yokukumangaza. Ngemuva kokufika lapho uya khona, i-Google inikezela isihambi sakho ikhadi lolwazi lapho elingafunda khona kabanzi ngekhona lapho bathuthelwe khona.
Isikhombisi ngesiNgisi, iSpanishi, isiFulentshi kanye nesiJalimane.
Hlobana neSketchUp, uhlelo lokumodela lwe-3D lapho izinhlobo ze-3D zezakhiwo zingalayishwa kuGoogle Earth.
Iphaneli yokulawula ephazamisa ngokuqonda kakhulu futhi izuze isikhala sokubonisa izithombe.
Ukuthuthuka okuvumelayo buka izithombe "ezibunjiwe" ze-3D (izindawo ezingokoqobo, amawindi, izitini ...)
Ngesici seMars seGoogle Earth, unga:
Bona izithombe ezilandiwe yi-NASA emahoreni ambalwa adlule kusendlalelo esibukhoma esivela kuMars.
Qaphela ukuvakashelwa okuhlangene eMars.
Buka amamodeli we-3D wezimoto ze-scout bese ulandela imizila yazo.
Thatha ukuvakasha okuqondisiwe kwezindawo zokufika, ezilandiswa osomkhathi bohlelo lwe-Apollo.
Buka amamodeli we-3D wemikhumbi ye-space mission.
Ungayifaka kanjani iGoogle Earth ku-Ubuntu 18.04?
Ukufaka iGoogle Earth kumakhompyutha ethu kufanele siqale ngokufaka ukuncika okuthile ezidingekayo ekusebenzeni kwesoftware kukhompyutha yethu. Okulandelayo, lokhu esizokufuna ngokuxhaswa yi-Synaptic:
Noma uma uthanda ungakwenza kusuka esigungwini ngemiyalo elandelayo:
Yize igatsha elikhulu le-Ubuntu linama-64-bit kuphela, okuphuma kulo okufana neXubuntu noma Kubuntu kuyaqhubeka nokweseka amasistimu angama-32-bit, ngakho-ke sabelana ngokuncika kwalezi zinhlelo.
Okwenzelwe amasistimu angama-32-bitNgaphambi kokuqala inqubo, faka imitapo yolwazi engama-32-bit edingwa uhlelo ngokuthayipha umyalo olandelayo ku-terminal.
Kwenze lokhu manje uma silanda ukuncika nge:
Manje kufanele nje siye kuwebhusayithi esemthethweni yephrojekthi bese silanda iphakethe lesikweletu abasinikeza lona, ​​i- isixhumanisi yilokhu.
Lapho ukulanda sekuqedile, singakwazi ukufaka uhlelo lokusebenza nomphathi wethu wephakheji oyithandayo noma uma uthanda ungavula i-terminal bese wenza umyalo olandelayo:
Uma kunesidingo faka ukuncika kohlelo ngomyalo:
Futhi ngalokhu sizoba nohlelo olufakiwe ohlelweni lwethu, kufanele silubheke kwimenyu yethu yohlelo lokusebenza, kufanele bakhumbule ukuthi bangasebenzisa izinsuku ezingama-7 zamahhala ezinikezwa yi-Google ukuhlola imisebenzi yalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Faka iGoogle Earth ku-Ubuntu 18.04 nakokunye okuphuma kukho
"IGoogle Earth uhlelo engiluvavanye ..."
Ngicabanga ukuthi kuyiphutha elibangelwe ukungalungisi okuzenzakalelayo, kepha lapho kufanele libeke "ukuhlinzeka".
UCosme guevara kusho
Sawubona, ngenze zonke izinyathelo ukufaka iGoogle Earth ku-Ubuntu 18.04, lesi yisithonjana kepha angikwazi ukusisebenzisa, ngiyabonga nemikhonzo
Phendula uCosme Guevara
Siyabonga ngokuthunyelwe !! Ngilandele izinyathelo futhi kusebenza kahle.
U-Adolfo Hernandez kusho
Amakheli wokuncika anikeza Iphutha 404, ngeke kube njalo ukuqhubeka ubheka
Phendula u-Adolfo Hernández